पर्सामा तीनवटा पिसिआर मेशिन ! प्राविधिक कहाँबाट आउने कसले चलाउने ?
प्रदेश सरकार र महानगरको जुङ्गाको लडाई
जनशक्ति अभावले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको पिसिआर मेशिन नै पुर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा वीरगंजमा तीनतीनवटा पिसिआर मेशिन जडान हुने भएको छ ।
प्रदेश २ का मन्त्रि परिषद बैठकले सोमबार वीरगंजलाई पनि पिसिआर मेशिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसंगै तीन–तीनवटा पिसिआर मेशिन वीरगंजमा जडान हुने भएको छ ।
यसअघि नै वीरगंज महानगरले पिसिआर मेशिन र स्वाब क्लेक्सन किट किन्न पैसा संकलन गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोमबार पिसिआर मेशिन किन्न बोलपत्र अह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भएको मेशिनलाई पुर्ण क्षमताको चलाउन नसकेर महानगरले जथाभावि पैसा उठाईरहेको जनगुनासो भईरहेको अवस्थामा तीनतीनवटा पिसिआर मेशिनको टेक्नीशियन कहाँबाट ल्याउने र कसले सञ्चालन गर्ने अन्यौल्ता अर्कोतर्फ छाएको छ । यता माहानगर आफैले मेशिन तथा किट किन्न बोलपत्र अह्वान गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ जनाले खरिद गरि उपलब्ध गराउने आश्य व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार र वीरगंज महानगरको जुङ्गाको लडाई
जुङ्गाको लडाईमा कि त जनता दुःखी हुन्छ, भने कि त अथाह खुशी भईदिन्छ । तर दुईबिचको लडाईमा जनता अर्कोतर्फ पिडित बनिरहेका हुन्छ । अहिले महानगरका मेयर विजय सरावगी र प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी तथा सांसद प्रदिप यादवको लडाईमा जनता पिसिएका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी प्रदिप यादवको खेमाका छन् भने, वीरगंज महानगरका मेयर अर्कोतर्फ एक्लीएका छन् । महानगर आफैले किन्ने क्षमता नभएको भन्दै जनसहभागितामा मेशिन किन्ने निर्णय गरेसंगै यता मेयर विजय कुमार सरावगीको वाहवाही चुलेको छ । त्यसकै मेसो प्रदेश मुख्यमन्त्रीले पर्सावासीका लागी पिसिआर मेशिन उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् ।
यी दुबै सरकारको लडाईले कतिदिनदेखि राहतको पखाईमा रहेका सर्वसधारण मारमा परेका छन् भने भोटको राजनितिले पर्सामा तीन तीनवटा मेशिन जडान हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले वीरगंजका पिसिआर मेशिन खरिद गर्दै
महानगरका लागी पिसिआर मेशिन उपलब्ध गराउन पाँचथान बोलपत्र बिक्रि
उधोगीहरुको तर्फबाट पिसिआर मेसिन खरिद गर्न महानगरलाई ७० लाख सहयोग
#पिसिआर मेशिन खरिद #जनशक्ति अभाव
मगलवार, जेठ २७, २०७७, ०८:०६:००